पिडितले अझै पाएनन न्याय, हत्याकाण्डका दोषीलाई अझै किन भएन कारबाही ??? - inaruwaonline.com
पिडितले अझै पाएनन न्याय, हत्याकाण्डका दोषीलाई अझै किन भएन कारबाही ???
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १३, २०७३ समय: ९:४८:२१
१३ वैशाख, नरेन्द्र बस्नेत, बेलबारी मोरङ। सिंगो देशका जनताहरु लोकतन्त्र प्राप्तिका लागी सडकमा आन्दोलनरत रहेका थिए । लोकतन्त्र प्राप्तीका लागी सबै नेपालीहरु सडकमा आन्दोलन गरिरहेका बेला आन्दोलन उत्कर्षमा समेत पुगेको थियो । त्यति नै बेला मोरङको बेलबारीमा नेपाली सेनाले गरेको नरसंहारकारी घटना गराएको आज १० बर्ष पुगेको छ । अझैसम्म पनि बेलबारीबासीहरुले त्यो कालो दिन भुल्न सकेका छैनन । र पिडितले अझै न्याय समेत पाउन सकेका छैनन ।
न्यायको अभाबमा पिडितहरु अझै भौतारिरहेका छन । आज सम्म न त दोषीलाई कारबाही नै भएको पिडितलाई थाहा छ न त सरकारले पिडितलाई उचित क्षतिपुर्ति दिएको नै थाहा छ । बि.स.२०६३ बैशाख १२ गते राति स्थानीय २२ बर्षीया सपना गुरुङको नेपाली सेनाले बलात्कारपछि हत्या गरेपछि घटनाको बिरोधमा बैशाख १३ गते सोही घटनाको बिरोधमा उत्रिएका हजारौँ स्थानीयमाथी सेनाले अन्धाधुन्द गोली चलाँउदा ६ जनाको ज्यान जानुका साथै ५२ जना निर्दोष सर्बसाधारण घाईते भएका थिए । मृत्यु हुनेमा बेलबारी ३ का सुनिता ऋषिदेब बेलबारी २ का प्रसाद गुरुङ,इन्द्रपुर ३ का फुर्बा तामाङ,इन्द्रपुर ४ का प्रभुनाथ भटराई,मृगौलिया ८ का छत्र बहादुर परियार रहेका छन भने सो घटनामा घाईते भएका बेलबारी ४ का गोपालचन्द्र गौतमले पनि पिडा सहन नसकेपछि २०६६ चैत १४ गते आत्माहत्या गरिसकेका छन ।
घटनाको छानविन गर्न तत्कालिन सांसद परी थापाको संयोजकत्वमा गठित छानवीन समितिले मृतकका परिवारलाई १० लाख, अङभङग् भई घाइते भएकालाई ६ लाख, घाइतेलाई ७५ हजार र सामान्य घाइतेलाई २५ हजार छतिपूति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले भने मृतक परिवारलाई जनही ३ लाख, अङगभङ्ग भई घाइते भएका १० जनालाई जनही ७५ हजार, घाइते २२ जनालाई जनही २५ हजार र सामान्य घाइतेलाई १० हजारका दरले छतीपुर्ति दिएको थियो ।
घटना भएको एक दशक बितिसकेपनि घटनाका पिडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन । अझ सपनाका २ जना नानीहरुको लालनपालन गर्दै बसेकी उनकी आमा बेलबारी २ की ५१ बर्षीया शोभा गुरुङले त थुप्रै आश्वासन आएपनि काम कहिँबाट नभएको गुनासो यसअघिको भेटमा पोखेकी थिईन । सोही घटनामा घाईते भएका ब्यापारी फिरोज खान अझैपनि राम्रो सँग हिँडडुल गर्न सक्दैनन । चुरी ब्यापार गरेर राम्रै कमाई गर्दै आएका फिरोजका खुट्टामा चोट लागेका कारण अझैपनि उनी बैशाखीको सहारामा हिँडडुल गर्छन । घाईते भएपछि उनको बिवाह समेत हुन सकेको छैन । उनी सरकार र सम्बन्धित पक्षले आफुहरुको माग पुरा नगर्दा जिबन जिउँन गाहे भएको गुनासो गर्छन ।
सपना गुरुङ् हत्या काण्डका दोषीलाई तत्काल कारवाही घाईतेलाई उचित छतिपूर्ति उपचारको माग राखेर पीडितले थुप्रैपटक आन्दोलन गरे। सङघर्ष समिति पनि बन्यो तर केही पनि राहत मिल्न नसकेको पिडितहरु बताँउछन । सात जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्या काण्डका पीडितले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि वास्ता नगरेकाले आन्दोलन गर्नका लागि घाइते हेमसागर ढकालको संयोजकत्वमा पीडित सघर्ष समिति गठन गरी पटक पटक गिरिजा प्रसाद कोइराला,माधब कुमार नेपाल,पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकार समक्ष पुगेपनि पिडितहरुको मागका बारेमा कुनै सुनुवाई भने हुन सकेन ।
के भन्छन घटनाका जानकार तथा स्थानीय ?
बेलबारी घटनाका पिडित समेत रहेका हेमसागर ढकाल पटक पटक घटनाका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि सरकारले त्यस तर्फ खासै चासो नदिएको बताउँछन । सिडियो कार्यलममा ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि लिएर बिभिन्न पार्टीका सरकार भएको बेला सरकार प्रमुख सम्मलाई जानकारी गराउँदा समेत घटनाको बारेमा कुनै सुनुवाई नभएको उनी बताउँछन ।
बेलबारी घटनाका जानकार तथा नेकपा एमालेका मोरङ जिल्ला सदस्य समेत रहेका इरान राई बेलबारी घटनालाई राज्यले चासो नदिएको र नृषंश हत्याको बारेमा सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन । अपराधीलाई राज्यले संरक्षण दिएको र घटनाका बारेमा स्थानीय रुपमा राजनीतिक दलको एकता समेत नभएको उनले बताए । अपराधीलाई संरक्षण गर्नु उदेकलाग्दो कुरा भएको समेत उनले बताए । घटनाका पिडितलाई राज्यले अझै क्षतिपुर्ति दिन समेत उनले माग गरेका छन ।
बेलबारी घटनालाई नजिक बाट नियालेका स्थानीय बुद्धिजिवि तथा नयाँ शत्ति नेपालका मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का संयोजक प्रताप थापाले बेलबारी हत्याकाण्ड राज्यका तर्फबाट भएका कारण यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए । यतिका बर्ष बित्दा समेत राज्यले पिडितलाई क्षतिपुर्ति नदिनु लज्जास्पद रहेको समेत उनले बताए ।
घटनाका दोषीलाई के कारबाही भयो ?
बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको प्रतिक्षामा आफना लालाबालाको स्याहार गरेर बसेकी सपना गुरुङको बलात्कार पछि हत्या भएको बिरोधमा भोलिपल्ट स्थानीयको भिड उर्लियो ।
त्यहि भिडमाथी बैशाख १३ गते दिउँसो करिब २.३० तिर नेपाली सेनाका क्याप्टेन प्रल्हाद थापा मगरको आदेशमा गोली चलाईयो । ६ जनाको मृत्यु र सयौको हताहति पछि बिपी कोईराला प्रतिष्ठान धरानमा घाईतेको चाप थाम्न हम्मे परेपछि आकस्मिक साईरन बजाईयो । घटनाका दोषी ठानिएका नेपाली सेनाका तत्कालीन क्याप्टेन प्रल्हाद थापा मगरलाई सरकारले के कारबाही गरयो त्यो अहिले सम्म पिडितहरुलाई केही थाहा छैन ।
उनीमाथी बिभागीय कारबाही भएको सेनाले बताईरहेको छ तर उनीमाथी कस्तो कारबाही भयो र उनी अहिले कुन ओहदामा कहाँ कार्यरत रहेका छन या छैनन यो बिषय गुपचुप नै राखिएको छ । सपनाकी आमा आफु मर्नुअघि घटनाका दोषीलाई कारबाही भएको हेर्न चहान्छिन । साथै घटनाका घाईतेहरु अझैपनि न्यायको पर्खाइमा रहेका छन । र पिडितहरु अझैपनि क्षर्तिपुर्ति र राहतको आशामा छन । जिम्मेवार पक्षले यसबारेमा सोच्न समेत जरुरी देखिन्छ ।